Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin dagaala saf ballaaran ah ay ku qaadeen qaar ka mid ah deegaanada ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay kaga suganyihiin gobalkaasi.
Deegaanada Danow iyo Buulo shaeekh oo wada dhaca duleedka degmada Qoryooley ayeey habeenkii xalay ciidamada Mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen’waxaa deegaanadaasi ku sugan ciidamada Gaalada AMISOM.
Dagaaladan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona ay jiraan khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo gaalada lagu gaarsiiyay dagaalka walow si rasmi ah aan loo xaqiijin karin inta uu la egyahay.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya xilli maalintii shalay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay tiro madaafiic ah ku garaaceen difaacyada Kufaarta Afrikaanta ay ka sameysteen degmada Buulo mareer ee gobalka Shabeelada hoose.
Previous: Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Xabashida Itoobiya.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 30-09-1437 Hijri.